international – Page2– OOTDMYANMAR
CAMERON DIAZ: WHY SHE QUIT ACTING
No Comments on CAMERON DIAZ: WHY SHE QUIT ACTING
သရုပ်ဆောင်လောက ကနေ အမှန်တကယ် အနားယူလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Cameron Diaz
Cameron Diaz, the star of instant classics like My Best Friend’s Wedding, The Other Woman, Charlie’s Angels, and Shrek, sat down foravideo chat with Gwyneth Paltrow and revealed the real reason she quit acting.
My Best Friend’s Wedding, The Other Woman, Charlie’s Angels နဲ့ Shrek စတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကောင်းတွေရဲ့နာမည်ကျော်မင်းသမီးဖြစ်တဲ့ Cameron Diaz က သူမ ရုပ်ရှင်လောက ကနေ အနားယူလိုက်တဲ့အကြောင်းအရင်းကို မင်းသမီး Gwyneth Paltrow နဲ့ video chat မှာ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Cameron Diaz spoke to Gwyneth Paltrow about the real reason she quit acting.
Cameron Diaz spoke က Gwyneth Paltrow ကို သူမ သရုပ်ဆောင်အဖြစ်ကနေ နှုတ်ထွက်လိုက်တဲ့ အကြောင်းပြချက်အစစ်အမှန်ကို ဖွင့်ဟပြောပြခဲ့ပါတယ်။
She told Gwyneth:
“It’sastrange thing to say, I knowalot of people won’t understand it, I know you understand it, but it was so intense to work at that level and be that public and put yourself out there. There’salot of energy coming at you at all times when you’re really visible as an actor and doing press and putting yourself out there.”
“ပြောရမှာ နည်းနည်းတော့ထူးဆန်းနေလိမ့်မယ်။ လူအတော်များများကတော့ နားလည်ကြမှာ မဟုတ်ပေမယ့် မင်းကတော့နားလည်မယ်ဆိုတာ ငါသိတယ်။ ဒီအနေအထားနဲ့ လူတွေကြားထဲမှာ လူလုံးထွက်ပြရမှာ၊ သွားလာနေထိုင်ရမှာက တစ်ကယ်ကိုခက်ခဲတယ်။ လူတွေက ကိုယ့်ကို သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်လို့ သိမြင်ထားတဲ့အတွက် အာရုံစိုက်မှုတွေက ဘက်ပေါင်းစုံကနေ အချိန်တိုင်းလာနေတဲ့အပြင် ပရိတ်သတ်နဲ့အမြဲမပြတ်ထိတွေ့ဖို့ ပွဲတွေတက်နေရတယ်။” လို့ Cameron က Gwyneth ကို ရင်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။
When she made the decision to quit for good, Cameron described feeling “a peace in my soul because I finally was taking care of myself.” She added, “I had been going so hard for so long, working, making films, it’s suchagrind. I didn’t make any space for my personal life.”
Cameron က အပြုသဘောနဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ သူမရဲ့ခံစားချက်ကို အခုလိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ “ ကျွန်မစိတ်ဝိဉာဉ်က အရမ်းကိုငြိမ်းချမ်းနေပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ ကောင်းကောင်းဂရုစိုက်နိုင်ပြီ။” ဒါ့အပြင် “ကျွန်မ အချိန်အတော်ကြာကြာ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားခဲ့တယ်။ အလုပ်တွေလုပ်တယ်၊ ရုပ်ရှင်တွေရိုက်တယ် ၊ ပုံမှန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွေပါပဲ။ ကျွန်မရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝကိုဂရုစိုက်ဖို့ အချိန်အလုံအလောက် မပေးခဲ့မိဘူး” လို့ ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။
Now, Cameron is focused on the health and wellness industry, her just-released organic wine brand, Avaline, and her family, of course. Cameron and Benji Madden recently welcomedababy girl named Raddix, and she’s gushed that motherhood is “the best, best, best part of my life.”
လက်ရှိအချိန်မှာတော့ Cameron က ကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝ၊ သူမ မကြာသေးခင်ကမှ ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Organic ဝိုင် အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ Avaline နဲ့ သူမရဲ့မိသားစု အရေးတွေကိုပဲ အလေးပေးအာရုံစိုက်ဖြစ်နေပါတယ်။ Cameron နဲ့ Benji Madden က မကြာသေးခင်ကပဲ ချစ်စရာသမီးလေး Raddix ကို မွေးဖွားခဲ့ပါသေးတယ်။ မိခင်ဖြစ်ရခြင်းက သူမဘဝရဲ့ အကောင်းတကာ့အကောင်းဆုံး အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်း ပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။
Tags camerondiaz, hollywood, ootdmyanmar
ELDERLY COUPLE FROM TAIWAN BECAME FASHION FAMOUS ON IG
No Comments on ELDERLY COUPLE FROM TAIWAN BECAME FASHION FAMOUS ON IG
IG မှာ နာမည်ကြီးလာတဲ့ သက်ကြီးပိုင်း ထိုင်ဝမ် ဖက်ရှင်စုံတွဲ
Taiwanese laundry shop owners Wanji and Xiu are turning waves online for their fashionable outfits. The married couple, both aged 83, were encouraged by , Sun Tzu, their grandson, to take photos with the shop’s abandoned and unpaid clothes in their own style.
ထိုင်ဝမ် က အဝတ်လျှော်ဆိုင်ပိုင်ရှင် ဖြစ်တဲ့ Wanji နဲ့ Xiu က သူတို့ရဲ့ ဖက်ရှင်ကျတဲ့ဝတ်စုံတွေနဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ လှုပ်ခတ်သွားအောင် လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၈၃ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ စုံတွဲက သူတို့ရဲ့မြေး Sun Tzu ရဲ့ အားပေးမှုနဲ့ ဆိုင်မှာ မရွေးဘဲကျန်နေတဲ့အဝတ်အစားအချို့ကို စတိုင်ကျအောင်ဝတ်ဆင်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြတာပါ။
Their Instagram account (@wantshowasyoung) instantly blew up, quickly garnering over 10,000 followers inaspan of 15 days. Now, they are almost close to halfamillion followers.
သူတို့ရဲ့ Instagram account (@wantshowasyoung) က အချိန်တိုအတွင်းမှာ နာမည်ကြီးသွားပြီး ၁၅ ရက်အတွင်း follower တစ်သောင်း ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ follower အရေအတွက်က သိန်းချီနေပါပြီ။
Here are some of our favorite looks from this #couplegoals.
သူတို့ရဲ့ #couplegoals တွေထဲက OOTD သဘောကျတဲ့ပုံအချို့ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
一樣的衣服換一件裙子、一樣的褲子換一件衣服，再加上秀娥一個新的態度，就成了不同的萬吉👴🏼和秀娥👵🏼 萬吉很謝謝大家關心！藏起來的右手努力康復中！ 👴🏼萬吉（身長160） 襯衫：至少6年未取花襯衫 內衣：萬吉日常白內衣 褲子：萬吉私服工作短褲 👵🏼秀娥（身長155） 上衣：8年未取紀念T(已找到新主人) 領巾：再度由被遺棄的手帕擔綱 裙子：再度由秀娥30年私服擔綱 💡溫馨提醒｜洗衣服請記得拿、認同請分享❤️ These old clothes have been abandoned by customers at the laundry for years. Owners of the laundry store, Wanji and Sho-Er who are over 80 years old. Grandson just can't bear to see them overwhelmed with bore everyday. So, ask them to reinterpret fashion, hoping to let everyone know that age is notabarrier to have fun in fashion and even old clothings can transformed into trendy outfits! 💡A friendly reminder｜Don’t forget to pick up your laundry. #萬秀洗衣店 #Wantshow #wantshowasyoung #grandparents – #mixandmatch #clothes #craftsman #しょくにん #ootd #wiw #instafashion #style #fashion #couple #夫婦 #80代 #budapest #grandma #grandpa #dappei @dappei_tw #juksyootd @mixfitmag_snap #cool_ootd #plainme_snap #plainme_life #femmefuture #culturecartel @nataliadornellas #classyvision #vintage #古着 #コーディネート
你看看，秀娥的臉真的很會擺！ 整理找到2件被遺忘的Adidas，所以今天嘗試兩個人年輕時也沒穿過的運動型態！也是店裡比較意外居然會被遺忘的年輕款式（？）結果萬吉秀娥還是輕鬆駕馭😅從櫃檯把阿公發呆的椅子拉出來讓他們坐著，結果秀娥自己擺了這樣的pose?! 👴🏼萬吉 上衣：主人已領取 褲子：萬吉私服—洗衣服時穿的工作褲 👵🏼秀娥 上衣：5年以上未取女白T 外套：2年以上未取Adidas 棒球外套 褲子：阿嬤私服，年代自己都忘了 💡溫馨提醒｜洗衣服請記得拿、認同請分享❤️ These old clothes have been abandoned by customers at the laundry for years. Owners of the laundry store, Wanji and Sho-Er who are over 80 years old. Grandson just can't bear to see them overwhelmed with bore everyday. So, ask them to reinterpret fashion, hoping to let everyone know that age is notabarrier to have fun in fashion and even old clothings can transformed into trendy outfits! 💡A friendly reminder｜Don’t forget to pick up your laundry. #萬秀洗衣店 #Wantshow #wantshowasyoung #grandparents #mixandmatch #clothes #craftsman #しょくにん #ootd #wiw #instafashion #style #fashion #couple #夫婦 #80代 #budapest #grandma #grandpa #dappei @dappei_tw #juksyootd @mixfitmag_snap @uniqlo_ootd #converse @converse #cool_ootd #plainme_snap #plainme_life #ynet #femmefuture #culturecartel @nataliadornellas #classyvision #adidas
Wanji and Xiu’s coordinated outfits are upon to par, and obviously on-trend. They’ve curated looks from athleisure, streetwear, to vintage—and all through their own styling. Obviously, we can even take inspos from their OOTDs.
Wanji and Xiu စုံတွဲ ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ စတိုင်တွေက နာမည်ကြီးပြီး လတ်တလော ခေတ်စားနေတဲ့ဒီဇိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဒီဇိုင်းတွေ၊ လူငယ်ဆန်တဲ့ဒီဇိုင်းတွေကနေ ခေတ်ဟောင်းဒီဇိုင်းတွေအထိ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ဖက်ရှင်အမြင်နဲ့ ဖန်တီးဝတ်ဆင်ခဲ့ကြတာပါ။ ဖက်ရှင်ချစ်သူတွေအားလုံး သူတို့ရဲ့ OOTD တွေကနေ မှီငြမ်းလို့ရပါတယ်။
No Comments on DEMI LOVATO IS ENGAGED!
Demi Lovato က သူမနဲ့ တစ်နှစ်နီးပါးလက်တွဲခဲ့တဲ့ချစ်သူ Max Ehrich နဲ့ စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်နေ့မှာ အားလုံးကို အသိပေးခဲ့ပါတယ်။
On Instagram, Demi wrote, “When I wasalittle girl, my birth dad always called me his ‘little partner’—something that might’ve sounded strange without his southern cowboy like accent. To me it made perfect sense. And today, that word makes perfect sense again but today I’m officially going to be someone else’s partner.”
“ကျွန်မ ကလေးဘဝတုန်းက အဖေက ကျွန်မကို သူ့ရဲ့လက်တွဲဖော်လေး လို့ ခေါ်လေ့ရှိပါတယ်။ သူရဲ့ တောင်ပိုင်းသံဝဲနေတဲ့ ကောင်းဘွိုင်တွေလိုလေသံမျိုးနဲ့သာမဟုတ်ရင် ကြားရမှာတစ်မျိုးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်မအတွက်တော့ အဲ့ဒီအချိန်တွေက ပြီးပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ်။ အခု အဲ့ဒီပြီးပြည့်စုံတဲ့ခံစားမှုမျိုးကို ကျွန်မနောက်တစ်ခါ ပြန်ခံစားရပါပြီ။ ဒါပေမယ့် တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ လက်တွဲဖော်အဖြစ်နဲ့ပေါ့” လို့ Demi က သူမရဲ့ instagram မှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
To her new fiancee, she said, “I knew I loved you the moment I met you. It was something I can’t describe to anyone who hasn’t experienced it firsthand but luckily you did, too. I’ve never felt so unconditionally loved by someone in my life (other than my parents) flaws and all. You never pressure me to be anything other than myself. And you make me want to be the best version of myself. I’m honored to accept your hand in marriage. I love you more thanacaption could express but I’m ecstatic to startafamily and life with you. I love you forever my baby. My partner. Here’s to our future!!!!”
Demi က သူမရဲ့သတို့သားလောင်းကို ဒီလိုပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ “ရှင့်ကို စတွေ့တဲ့အချိန်ကတည်း ချစ်မိသွားမှန်း ကျွန်မတပ်အပ်သိခဲ့ပါတယ်။ မြင်မြင်ချင်းမှာချစ်မိတဲ့ခံစားမှုမျိုးဟာ မခံစားဖူးသူတွေအတွက်တော့ ရှင်းပြရခက်နေပါလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့် ရှင်ကတော့ နားလည်ခဲ့တယ်။ ကျွန်မဘဝမှာ ကျွန်မရဲ့ အပြစ်အနာဆာတွေကို မျက်ကွယ်ပြုပြီး ကျွန်မကို အကြောင်းပြချက်မရှိချစ်ပေးတဲ့လူမျိုး ကျွန်မ မိဘကလွဲရင် မရှိခဲ့ပါဘူး။ ရှင်က ကျွန်မရဲ့အရှိအတိုင်းရှင်သန်နေဖို့ကလွဲပြီး တစ်ခြားလူတစ်ယောက်အဖြစ်နေထိုင်ဖို့ ဘယ်တုန်းကမှ ဖိအားမပေးခဲ့ဖူးဘူး။ ရှင်က ကျွန်မကို ကျွန်မရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံအဖြစ် ရှိနေစေချင်တာလေ။ ရှင့်လက်ကိုတွဲပြီး အိမ်ထောင်တစ်ခုထူထောင်ဖို့ ကျွန်မအလေးအနက်ထားပြီးလက်ခံပါတယ်။ စကားလုံးတွေနဲ့ ဖော်ပြနိုင်တာထက်ပိုပြီး ရှင့်ကိုချစ်ပါတယ်။ ရှင်နဲ့အတူ မိသားစုဘဝတည်ဆောက်ဖို့ကိုလည်း အရမ်းဝမ်းသာနေမိတယ်။ ကျွန်မ ရှင့်ကို အမြဲထာဝရချစ်နေမယ်။ ကျွန်မရဲ့ လက်တွဲဖော်ရေ…။ ကျွန်မတို့ရဲ့အနာဂါတ်ကို အတူသွားကြရအောင်။”
Max posted about the happy occasion, too: “You are every love song, every film, every lyric, every poem, everything I could ever dream of and then some inapartner in life. Words cannot express how infinitely in love with you I am forever and always and then some. I cannot spend another second of my time here on Earth without the miracle of having you as my wife. Here’s to forever baby…”
Max က လည်း ပျော်ရွှင်စရာပွဲလေးအတွက် ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ ဒီလိုပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ “ မင်းကငါ့ရဲ့ အချစ်သီချင်းတွေ၊ ရုပ်ရှင်တွေ၊ သီချင်းစာသားတွေ၊ အချစ်ကဗျာတွေ ၊ ငါမျှော်လင့်နိုင်သမျှအရာအားလုံးနဲ့ ငါ့ဘဝရဲ့ လက်တွဲဖော်ပါပဲ။ မင်းကို ကိုယ်ဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာ စကားလုံးတွေနဲ့တောင်ဖော်ပြလို့မရပါဘူး။ အမြဲတမ်း နဲ့ ထာဝရပါပဲ။ မင်းကို ကိုယ့်ရဲ့ချစ်ဇနီးအဖြစ်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရဘဲ ဒီကမ္ဘာမှာ တစ်စက္ကန့်လေးတောင် မနေချင်ပါဘူး။ ထာဝရအတွက်ပါပဲ အချစ်ရေ…”
Article originally appeared on Cosmo.ph and minor edits were done by OOTDMYANMAR editors
Cosmo.ph တွင်ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါးကို OOTDMYANMAR အယ်ဒီတာများမှ အနည်းငယ် ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ထားပါသည်။
Tags celebrity, demilovato, ootdmyanmar
GIGI HADID SHOWED HER BABY BUMP FOR THE FIRST TIME!
No Comments on GIGI HADID SHOWED HER BABY BUMP FOR THE FIRST TIME!
ကိုယ်ဝန်ကို ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ပရိတ်သတ်တွေကို ပြသခဲ့တဲ့ GiGi Hadid
Gigi Hadid has given her fans the first glimpse at her baby bump two months before her due date. The supermodel, who is expecting her first child with boyfriend Zayn Malik, hopped on Instagram Live on Wednesday night and showed off her belly as she revealed why she’s decided to remain private about her pregnancy.
Gigi Hadid က မီးဖွားရက်မတိုင်မီ နှစ်လ အလိုမှာ သူမရဲ့ကိုယ်ဝန်ကို ပရိတ်သတ်တွေကို ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ပြသခဲ့ပါတယ်။ စူပါမော်ဒယ်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Gigi က သူမရဲ့ချစ်သူ Zayn Malik ရဲ့ရင်သွေးကိုလွယ်ထားပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်း ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ညက Instagram မှာ live လွှင့်ပြသရင်း ဒီကိစ္စကို ဘာကြောင့်ထိမ်ချန်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သလဲဆိုတာကိုပါ ထပ်လောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။
Photo credits to Gigi Hadid’s Instagram
Addressing fans who said she didn’t look pregnant in her last Instagram Live, she lifted open her shirt to show off her growing bump. “There’s my belly, y’all. Like it’s there. It’s just from the front it’s different,” she laughed.
Gigi ရဲ့ instagram live မှာ ကိုယ်ဝန်ရှိနေမှန်းမသိသာဘူးဆိုတဲ့ fan တွေရဲ့ပြောကြားချက်ကို Gigi က သူမရဲ့အင်္ကျီကို မ, ပြီး ပူနေတဲ့ဗိုက်ကိုပြရင်း “ အားလုံးပဲ ဒါ ကျွန်မရဲ့ ဗိုက်ပါ။ ဒီမှာပါ။ ဒါ အရှေ့ဘက်ကနေပြထားတာ မတူပါဘူး” လို့ ရယ်ရယ်မောမော နဲ့ တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
Promoting her latest project with V magazine, The Gigi Journal: Part II , the model asked fans to send her questions ahead of the Q&A.
Gigi က V magazine နဲ့ Project ဖြစ်တဲ့ The Gigi Journal: Part II အကြောင်း promote လုပ်တဲ့အနေနဲ့ သူမရဲ့ပရိတ်သတ်တွေကို အမေးအဖြေကဏ္ဍအတွက် မေးခွန်းတွေပို့ပေးဖို့လည်း တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
The 25-year-old also explained why she’s not been posting more about her pregnancy, continuing: “Obviously, I thinkalot of people are confused why I am not sharing more but I am pregnant throughapandemic… obviously my pregnancy is not the most important thing going on in the world. That’sareason that I felt like it’s not really something that I need to share apart with my family and friends.”
အသက် ၂၅ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Gigi က သူမရဲ့ကိုယ်ဝန်အကြောင်းကို ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ အများကြီးမဖော်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလည်း ရှင်းပြခဲ့ပါသေးတယ်။ “ တော်တော်များများက ကျွန်မရဲ့ကိုယ်ဝန်အကြောင်း ဘာကြောင့်ဒီထပ်ပိုပြီး မပြောပြခဲ့လဲဆိုတာ စဉ်းစားရကြပ်နေကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်မက ဒီကပ်ဆိုးကာလကြီးအတွင်းမှာ ကိုယ်ဝန်ရခဲ့တာလေ။ ကမ္ဘာတလွှားက ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲမှာ ကျွန်မရဲ့ကိုယ်ဝန်က အရေးကြီးဆုံးကိစ္စမဟုတ်တာ အသိအသာကြီးပါ။ ဒါကြောင့် ဒီကိစ္စကို ကျွန်မရဲ့မိသားစုနဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေကလွဲလို့ အခြားသူတွေကို အသိပေးဖို့မလိုအပ်ဘူးလို့ ခံစားရတဲ့အတွက် မပြောဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။ ” လို့ Gigi က ဖြေရှင်းခဲ့ပါတယ်။
She added that she’s been documenting her pregnancy journey for her nearest and dearest, but will share pictures with fans “in the future”.
ဒါ့အပြင် Gigi က ကိုယ်ဝန်ရှိမှန်းသိရတဲ့အချိန်ကစပြီး အခုအချိန်ထိ သူမချစ်ရတဲ့သူတွေအတွက် မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ကြောင်းနဲ့ အနာဂါတ်မှာ သူမရဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကိုလည်း ပြသသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Gigi, who is thought to be due in September, confirmed her pregnancy in early May during an appearance on The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. After Fallon congratulated her on the news following days of speculation, she said: “We’re very excited and happy and grateful for everyone’s well wishes and support.”
စက်တင်ဘာ လ မှာ မီးဖွားနိုင်ဖို့လျာထားတဲ့ Gigi က သူမ ရင်သွေးလေးလွယ်ထားရပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်း မေလ မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ The Tonight Show မှာ Jimmy Fallon နဲ့အတူ ဖျော်ဖြေရင်း အတည်ပြုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Fallon က သူမကို ဂုဏ်ပြုခဲ့ပြီးတဲ့နောက် Gigi က “ကျွန်မတို့ အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားပြီး အရမ်းလဲပျော်နေပါတယ်၊ အားလုံးရဲ့ ဆုတောင်းတွေ၊ အားပေးမှုတွေကြောင့် အရမ်းလဲ ဝမ်းသာရပါတယ်” လို့ တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
We can’t wait to see the pictures when Gigi’s ready to share them.
Gigi share ပေးမယ့်ဓာတ်ပုံလေးတွေကို မြင်ရဖို့ မစောင့်နိုင်တော့ပါဘူး။
This article originally appeared on Cosmopolitan.com/uk. Minor edits have been made by the ootdmyanmar editors.
Cosmopolitan.com/uk. တွင်ဖော်ပြထားသောအကြောင်းအရာကို ootdmyanmar အယ်ဒီတာများမှ အနည်းငယ်ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ထားပါသည်
Tags gigihadid, ootdmyanmar, zayn
JI SUN WOO’S DIAMOND NECKLACE ON ‘A WORLD OF MARRIED COUPLE’ IS WORTH $150,000 USD
No Comments on JI SUN WOO’S DIAMOND NECKLACE ON ‘A WORLD OF MARRIED COUPLE’ IS WORTH $150,000 USD
ကန်ဒေါ်လာ ၁၅၀,၀၀၀ တန်ကြေးရှိတဲ့ ‘A World Of Married Couple’ ကြယ်ပွင့် Ju Sun Woo ရဲ့ စိန်လည်ဆွဲ
Are you alsoafan of A World of Married Couple like us? If yes, here is an article to give more spark to your addiction to this K-Drama!
အချစ်တို့ရော ‘A World Of Married Couple’ ဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့ ပရိတ်သတ်တွေပဲလား။ ဟုတ်တယ်ဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီ ကိုရီးယားဒရာမာ ဇာတ်လမ်းတွဲနဲ့ပက်သက်တဲ့ အချက်အလက်အချို့ကိုဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။
It’s no secret that Ji Sun Woo (played by Kim Hee Ae) is so rich and very stylish. The outfits and accessories we spotted on this show totally blew us away—from designer coats to her gorgeous Birkins. Today, we’re puttingahighlight onapiece that caught our eye : Sun Woo’s diamond necklace.
ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာ Ji Sun Woo (Kim Hee Ae ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထား) က အရမ်းချမ်းသာပြီး စတိုင်ကျတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဆိုတာတော့ ဖုံးကွယ်ထားလို့မရပါဘူး။ ဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာ သူမ ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ လက်ဝတ်လက်စားတွေ၊ ဒီဇိုင်နာကုတ်တွေနဲ့ အိတ်တွေ အားလုံးကို လိုက်ရှာကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ တစ်ကယ်ကို အံ့အားသင့်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ OOTD ကို မြင်မြင်ချင်းဖမ်းစားလိုက်တဲ့ Sun Woo ရဲ့ စိန်လည်ဆွဲအကြောင်းကို အဓိကထားပြီး ပြောပြသွားမှာပါ။
The gorgeous piece around her neck isaTiffany T1 Diamond Necklace, it costsacool $150,000 it’s made with “18k rose gold with baguette and round brilliant diamonds.”
သူမရဲ့လည်တိုင်လေးမှာ နေရာယူထားတဲ့ ကျက်သရေရှိလွန်းတဲ့ စိန်လည်ဆွဲက Tiffany T1 စိန်လည်ဆွဲဖြစ်ပြီး ကန်ဒေါ်လာ ၁၅၀,၀၀၀ တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ ထောင့်မှန်စတုဂံပုံသွေးထားတဲ့ တလက်လက်တောက်ပနေတဲ့ စိန်တွေကို 18 K rose gold နဲ့ လှပသေသပ်စွာ အနားသတ်ထားပါတယ်။
Photo credits @Pinterest
Tags international, ootdmyanmar
BLACKPINK’S LISA WAS SCAMMED OVER $800K BY HER FORMER MANAGER
No Comments on BLACKPINK’S LISA WAS SCAMMED OVER $800K BY HER FORMER MANAGER
မန်နေဂျာဟောင်းဖြစ်သူရဲ့ ဒေါ်လာရှစ်သိန်းကျော် လိမ်လည်ခံခဲ့ရတဲ့ BLACKPINK’S Lisa
It has just been reported that BLACKPINK’s Lisa wasavictim of fraud by her former manager. Initial reports said that the manager, who has worked with BLACKPINK since their debut, got money from Lisa to “look into real estate for her” but used the money amounting to one billion won (over $800,000) to gamble instead.
BLACKPINK ရဲ့ Lisa ဟာ သူမရဲ့မန်နေဂျာဟောင်းဖြစ်သူရဲ့ ငွေကြေးလိမ်လည်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်း သတင်းတွေမှာ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ BLACKPINK ကို စတင်မိတ်ဆက်ချိန်ကတည်းက လက်တွဲလုပ်ကိုင်လာတဲ့ မန်နေဂျာဟောင်းဟာ Lisa ကို နေထိုင်ဖို့အိမ်ရှာပေးမယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ငွေကြေးတစ်ဘီလီယံ (ဒေါ်လာရှစ်သိန်းကျော်) ကို လိမ်လည်ပြီး လောင်းကစားအတွက် အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။
YG Entertainment said inastatement that the former manager had taken responsibility for the wrongdoing. The company also stated it had taken precautionary measures to avoid something similar happening in the future.
YG Entertainment ကတော့ မန်နေဂျာဟောင်းက သူ့ရဲ့မှားယွင်းတဲ့လုပ်ရပ်အတွက် တာဝန်ယူမယ့်အကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ နောက်ထပ် ဒီလိုအလားတူဖြစ်ရပ်မျိုး ထပ်မဖြစ်အောင်လည်း အထူးသတိပြု ကာကွယ်သွားမယ့်အကြောင်းလည်း ထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Article originally from cosmo.ph and minor edits were done.
cosmo.ph တွင်ဖော်ပြထားသောအကြောင်းအရာကို အနည်းငယ်ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ထားပါသည်။
Tags international, lisa
K-DRAMA STARS + THEIR ADORABLE PETS
No Comments on K-DRAMA STARS + THEIR ADORABLE PETS
K-Drama ကြယ်ပွင့်တွေနဲ့ သူတို့ရဲ့အချစ်ဆုံး အိမ်မွေးတိရိစာ္ဆန်လေးများ
Most K-drama actors are known to be so private with their personal lives. And sometimes we are often curious whether they are dating their co-star. But we can assure you one thing , these famous stars are inacute relationship with their furry pets. And it’s time you meet some of them:
K-Drama ကြယ်ပွင့်အများစုက သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဘဝကိုလျှို့ဝှက်ထားတတ်ကြတယ်လို့ လူသိများပေမယ့် တခါတလေကျရင် သူတို့ရဲ့တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့များ စုံတွဲခုတ်နေကြလား ဆိုတာကို ပရိသတ်တွေက စပ်စုတတ်ကြပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် နာမည်ကြီးကြယ်ပွင့်တွေနဲ့ အိမ်မွေးတိရိစာ္ဆန်လေးတွေရဲ့ ချစ်စရာဆက်နွယ်မှုလေးတွေကို OOTD က ဖော်ပြပေးသွားမှာပါ။ ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။
1. Park Seo Joon and Simba
A post shared by 박서준 (@bn_sj2013) on May 11, 2019 at 11:06pm PDT
2. Lee Min Ho and Choco
A post shared by 이민호 leeminho (@actorleeminho) on Apr 25, 2019 at 7:48pm PDT
3. Park Shin Hye with Haeri, Dal, Nori, and Bongji
아침에 엄마집에서 미역국 먹고 왔어요. 오늘 아침 눈떠서 내가 행복할 수 있었던 이유는 여러분이 내게 보내준 축하와 사랑 덕분이에요. 감사합니다 내사랑들❣️ 매일 행복하게 살려고 하지만 오늘은 그 어느날 보다도 행복하게 보내렵니다!! #내얼굴을빵떡이지만#해리가귀여우니까
A post shared by 박신혜 (@ssinz7) on Feb 17, 2020 at 8:44pm PST
4. Park Min Young and Leon
추운날씨 감기조심하세요 ☕️ #내손난로박레옹
A post shared by 박민영 Minyoung Park (@rachel_mypark) on Dec 25, 2018 at 8:29pm PST
5. Kim Myung Soo and Byul
6. Lee Sung Kyung with Gureumee, Boy and Ddu Ddu
A post shared by 이성경 (@heybiblee) on Oct 24, 2018 at 8:02am PDT
A post shared by 이성경 (@heybiblee) on May 21, 2016 at 3:26am PDT
7. Nam Joo Hyuk with Ga Eul and Gob Soon
A post shared by @skawngur on Nov 14, 2017 at 12:00am PST
A post shared by @ skawngur on Jan 4, 2018 at 4:11am PST
A post shared by @skawngur on Oct 7, 2018 at 11:13pm PDT
Tags international, ootdmyanmar, pets
BOOBIE BILLIE: INSTAGRAM’S STYLISH DOG
No Comments on BOOBIE BILLIE: INSTAGRAM’S STYLISH DOG
Fashion is for everyone — including our furry friends!
On that note, meet: Boobie Billie, an Italian greyhound/chihuahua who’s nailing awesome OOTDs on IG.
ဖက်ရှင်ဆိုတာ အားလုံးအတွက်ပါ – အမွှေးထူထူနဲ့ သူငယ်ချင်းလေးတွေအတွက်လည်းအကျုံးဝင်ပါတယ်။
အီတလီ greyhound နဲ့ Chihuahua စပ်ထားတဲ့ခွေးလေး Boobie Billie က သူ့ရဲ့အမိုက်စား OOTD တွေကြောင့် IG မှာ နာမည်ကြီးနေပါတယ်။
OOTD ရဲ့ အကြိုက်ဆုံးပုံတွေကတော့
Slime green hoodie, peanut butter carry on.
A post shared by Boobie (@boobie_billie) on Dec 22, 2019 at 7:53am PST
They call me Le petit Chiquito 💛
A post shared by Boobie (@boobie_billie) on Dec 30, 2019 at 12:11pm PST
A post shared by Boobie (@boobie_billie) on Feb 7, 2020 at 8:58am PST
Feeling like one of Blue Ivy’s boots 😌
A post shared by Boobie (@boobie_billie) on Mar 9, 2020 at 9:36am PDT
A post shared by Boobie (@boobie_billie) on Mar 28, 2020 at 9:00am PDT
Thank you for flying Air Boobie. Next stop: The kitchen table 💫
A post shared by Boobie (@boobie_billie) on Apr 8, 2020 at 9:40am PDT
A Boobquet for your mother 🌷
A post shared by Boobie (@boobie_billie) on May 10, 2020 at 9:40am PDT
Tags Fashion, international, ootdmyanmar
THE DESIGNER BAGS WE ARE OBSESSED FROM “CRASH LANDING ON YOU “+ PRICES
No Comments on THE DESIGNER BAGS WE ARE OBSESSED FROM “CRASH LANDING ON YOU “+ PRICES
We’ve recently shared in our instagram stories the designer bags we love from this hit K-POP drama. Andalot of our followers were asking the price list. So, we did some researching for you: Now, it’s time to go shopping!
“Crash Landing on You” ထဲက လူတိုင်းငေးရတဲ့ designer အိတ်နဲ့ ဈေးနှုန်းများ
နာမည်ကြီးတဲ့ ဒီ K-POP drama ထဲက လက်ကိုင်အိတ်တွေအကြောင်းကို OOTD ရဲ့ Instagram story မှာ မကြာသေးခင်ကပဲ တင်ထားပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် follower အများစုက ဈေးနှုန်းလာမေးကြလို့ အားလုံးအတွက် ရှာရှာဖွေဖွေ လုပ်ပေးထာပါတယ်။ ကဲ shopping ထွက်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီနော်။
1. Gucci Zumi Tote Bag
$3200, GUCCI, gucci.com
PHOTO BY TVN/CRASHLANDINGONYOU,
2. Gucci Sylvie 1969 Mini Patent-Leather Shoulder Bag
$3200 , GUCCI, gucci.com
PHOTO BY TVN/CRASHLANDINGONYOU, GUCCI
3. Longchamp Roseau Top Handle Bag
$510 LONGCHAMP, longchamp.com
PHOTO BY TVN/CRASHLANDINGONYOU, LONGCHAMP
4. Jimmy Choo Cloud Clutch Bag
€3350, JIMMY CHOO, row.jimmychoo.com
PHOTO BY TVN/CRASHLANDINGONYOU, JIMMY CHOO
5. Loewe Gate Small Leather Cross-Body Bag
$2700 LOEWE, loewe.com
PHOTO BY TVN/CRASHLANDINGONYOU, LOEWE
6. Tod’s D-Styling Medium
€2700, TOD’S, luisaviaroma.com
PHOTO BY TVN/CRASHLANDINGONYOU, TODS
7. Chanel Small Shopping Bag
$3200, CHANEL, chanel.com
PHOTO BY TVN/CRASHLANDINGONYOU, CHANEL
8. Valentino Small VSLING Bag
$2575, VALENTINO, valentino.com
PHOTO BY TVN/CRASHLANDINGONYOU, VALENTINO
9. Roger Vivier So Vivier Medium Leather Shoulder Bag
$2900, ROGER VIVIER
PHOTO BY TVN/CRASHLANDINGONYOU, ROGER VIVIER
10. Marni Trunk Bag
PHOTO BY TVN/CRASHLANDINGONYOU, MARNI
11. Miu Miu Pink Quilted Miu Confidential Bag
$1576, MIU MIU.
PHOTO BY TVN/CRASHLANDINGONYOU, MIU MIU
Article originally appeared on preview.com and minor revisions were done.
Tags Fashion, international, KDRAMA, KPOP
5 MOVIES TO WATCH FOR FEBRUARY 14
No Comments on5MOVIES TO WATCH FOR FEBRUARY 14
February 14 may not beapublic holiday but the world celebrates Valentine’s Day. People from all over the world express their love in different ways. What if you’re single or you don’t have budget, does it mean you have to skip Valentine’s Day? Of course NOT! You can spend the day at home watching romantic movies to feel the spirit of Valentine’s Day. So below, you’ll findalist of the top6best romantic movies to watch for Valentine’s Day.
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်နေ့ဟာ အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်မဟုတ်ပေမယ့် တစ်ကမာ္ဘလုံးက ချစ်သူများနေ့ကို ဆင်နွှဲကြပါတယ်။ ကမာ္ဘတစ်ဝှမ်းကလူတွေအားလုံးက သူတို့ရဲ့အချစ်တွေကို နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ ဖော်ပြတဲ့နေ့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီနေ့ကိုအတူဖြတ်သန်းမယ့်အဖော်လည်းမရှိဘူး၊ ပိုက်ဆံလည်းမရှိဘူးဆိုရင် ဘာလုပ်ကြမလဲ။ ချစ်သူများနေ့ ကို ဘာမှမလုပ်ဘဲ ကျော်သွားတော့မှာလား။ ဘယ်ဟုတ်မလဲ။ အိမ်မှာနေရင်း အချစ်ဇာတ်လမ်းတွေကြည့်ပြီး ချစ်သူများနေ့ကို ဖြတ်သန်းလို့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ ချစ်သူများနေ့မှာကြည့်သင့်တဲ့ အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင် ၅ ကား ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
#1 Sleepless in Seattle
Sleepless in Seattle,isalight romantic comedy.
က တော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အချစ်ဟာသဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်။
Tom Hanks stars as widower and single father Sam. When Sam’s son, Jonah (Ross Malinger), calls intoatalk radio program looking foranew mother, Sam ends up getting on the phone and laments about his lost love.
မင်းသား Tom Hanks က တစ်ခုလပ်ဖခင် Sam အဖြစ်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ Sam ရဲ့သား Jonah (Ross Malinger) က ရေဒီယိုအစီအစဉ်တစ်ခုကနေ အမေအသစ်ရှာတဲ့အချိန်မှာတော့ Sam တစ်ယောက် ဖုန်းပြောရင်း အချစ်ဟောင်းကိုသတိရပြီး ဝမ်းနည်းပူဆွေးသွားပါတော့တယ်။
Thousands of miles away, Annie (Meg Ryan) hears the program and immediately falls in love with Sam
Sam နဲ့ မိုင်ပေါင်းများစွာအကွာမှာနေထိုင်တဲ့ Anni (Meg Ryan) က ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကို ကြားကြားချင်း မှာပဲ Sam ကို ချစ်မိသွားပါတယ်။
In 1940s South Carolina, mill worker Noah Calhoun (Ryan Gosling) and rich girl Allie (Rachel McAdams) are desperately in love. But her parents don’t approve. When Noah goes off to serve in World War II, it seems to mark the end of their love affair. Allie becomes involved with another man (James Marsden). But when Noah returns to their small town years later, on the cusp of Allie’s marriage, it soon becomes clear that their romance is anything but over.
၁၉၄၀ ခုနှစ် ၊ ကယ်ရိုလိုင်းနားတောင်ပိုင်း မှာပေါ့။ အလုပ်သမားလေး Calhoun (Ryan Gosling) နဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ မိန်းကလေး Allie (Rachel McAdams) တို့က တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး မခွဲနိုင်မခွာရက် ချစ်ကျွမ်းဝင်နေကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Allie ရဲ့မိဘတွေက သဘောမတူကြပါဘူး။ Noah တစ်ယောက် ဒုတိယကမာ္ဘစစ်မှာ စစ်မှုထမ်းဖို့ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ သူတို့ရဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းလေး အဆုံးသတ်ဖို့ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Allie ကလည်း အခြားယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ဆုံသွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နှစ်တွေအများကြီးကြာပြီးနောက် သူတို့မြို့လေးကို Noah ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ Allie ရဲ့လက်ထပ်ပွဲကလည်း နီးကပ်နေပါပြီ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ သူတို့နှစ်ဦးရဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းက ပြီးဆုံးသွားရုံကလွဲပြီး ဘာမှဖြစ်မလာတော့ဘူးဆိုတာ သေချာသွားခဲ့ပါတယ်။
#3 Brokeback Mountain
လူမှုပတ်ဝန်းကျင်က တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားပေမယ့် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင် လျှို့ဝှက်ချစ်ပြီးချစ်နေရတဲ့ ကောင်းဘွိုင်နှစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
How about going back to the golden age of Myanmar cinema. Here are two movies which are featured by our legendary actors and actress. မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ရဲ့ရွှေခေတ်ကိုပြန်သွားကြရအောင်။ တစ်ခေတ်တစ်ခါကထင်ရှားခဲ့ပြီးအခုအချိန်ထိလည်း ပရိတ်သတ်ရင်ထဲမှာ နေရာယူထားဆဲဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့ ရုပ်ရှင်နှစ်ကားကို ညွှန်းပေးလိုက်ပါတယ်။
If we say “ Maung Mu Paing Shin”, it’sareminiscence of the sound track of this movie. Although it has two version, we recommend the remake version for now. Our all time favorite actors Dway, Htun Eaindra Bo, Lwin Moe and Htet Htet Moe Oo will make you feel the difference of first love and the most beloved.
မောင့်မူပိုင်ရှင် မောင့်မူပိုင်ရှင် လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ ရုပ်ရှင်ထဲကသီချင်းလေးကို သတိရပြီးလိုက်ဆိုမိကြတာပါပဲ။ မောင့်မူပိုင်ရှင် မှာ နှစ်မျိုးရှိပေမယ့် အခုညွှန်းပေးမှာကတော့ ဒုတိယအကြိမ်ပြန်ရိုက်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူချစ် သရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ ဒွေး၊ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ်၊ လွင်မိုး နဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး အချစ်ဦး နဲ့ အချစ်ဆုံး ရဲ့ကွာခြားချက်ကိုမြင်တွေ့ခံစားနိုင်မယ့် ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။
#5 Myat Hnar Myar Tae Kaung Kin “မျက်နှာများတဲ့ ကောင်းကင်”
The movie which Eaindra Kyaw Zin won the Academy award for best actress. And the co-stars are Yan Aung, Lwin Moe and Tint Tint Htun. It’sagood movie which deserves to be seen again.
“မျက်နှာများတဲ့ ကောင်းကင်” မျက်နှာများတဲ့ကောင်းကင် ရုပ်ရှင် က ပြည်သူ့အချစ်တော် အူဝဲ (ခ) အိန္ဒြာကျော်ဇင် အကယ်ဒမီ ရခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာ အိန္ဒြာကျော်ဇင် နဲ့အတူ ရန်အောင်၊ လွင်မိုး နဲ့ တင့်တင့်ထွန်း တို့ က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ကလည်းပြန်လည်ခံစားသင့်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားကောင်း တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
What would you recommend us to watch? Comment below
ချစ်သူများနေ့ မှာ ကြည့်လို့ကောင်းမယ့်ရုပ်ရှင်လေးရှိရင် comment မှာ ညွှန်းပေးပါဦး။